Lesi Sipho Sosuku Lwezithandani Sika-68YO Sombhali Sikumkakhe Sihlaziya kabusha #ActOfLove - Izincwadi
Lesi Sipho Esithandekayo Sombhali Sika-68YO Kumfazi Wakhe Sichaza kabusha #ActOfLove
Usuku lukaValentine luyisikhumbuzo esinobuhlungu sokuthi imikhosi yothando enomsindo ingaba kanjani esikhathini sokuxhumana ngokweqile. Enkathini ye-Instagram kanye nokubhujiswa kwenhlekelele, sithanda ukwenza izenzo zothando ezidlula ngaphesheya kolwandle lomngcele osobala eqinisweni, bese sibambelela ezintanjeni zezinhliziyo zethu - phakade nangaphezulu. Akunzima kangako ukuthola izizathu zothando, umlobi oneminyaka engama-68 wangitshela, owashicilela iqoqo lezindaba ezimfushane ngoSuku Lwezithandani, lomkakhe, uMahe Talat- “inyanga yakhe ayithandayo”, njengoba embiza kanjalo , ngothando.
KuShakil Siddiqui, uchwepheshe wasebhange osethathe umhlalaphansi, ukubhala kungumsebenzi we-simpleton, kodwa umehluko kuphela wokubeka yisizathu, okuyincwadi yakhe yesine, esihloko sithi Mahe - Wethemba Ebumnyameni, Ngunkosikazi wakhe weminyaka engama-35. Uhlanganise izindaba ezingama-20, ethinta izici eziningana zempilo, ukwakha le ncwadi. “Ube nomthelela omkhulu, hhayi kule ncwadi kuphela, kodwa nasempilweni yami. Eminyakeni engama-35 edlule yomshado– kukho konke ukwehla, umndeni nezihlobo, imisebenzi kanye namadolobha, ibanga kanye nezifo –sibambene ndawonye, ​​futhi sikhethe ukwenza lokho. Akuwona umshado onzima, uyimpilo - noma ngabe ukhetha ukushada noma cha, ”kuchaza elindele umbuzo olandelayo.
'Ngibhala ngoba ngiyakwazi, futhi ngiyakwazi ngoba uyena,' kusho uSiddiqui ngokusobala, futhi asikwazanga ukumelana nokubuza ukuthi wazi kanjani ukuthi nguye, ngoba ngubani ongeke! Kodwa awukwazi, wathi. 'Akulula, kepha ayikho enye indlela yokuthola kuze kube yilapho ungena kulokho nomuntu, uhlele impilo yakho, uzame ukuthanda izinto ngomunye nomunye, futhi ungayeki ukuyeka ukufunda,' usho kanje. “Uma ufuna ukungena kunoma yibuphi ubuhlobo, ufuna ukupheleliswa, awusoze wakuthola. Futhi noma ngabe wenza njalo, ngeke kuhlale kunjalo. Impilo leyo, ”kuchaza yena.
Ukucaca kwakhe kupenda imivimbo ebanzi endlekeni yakhe yezindaba futhi. Kodwa-ke, yize ebesebenza emkhakheni wezokuxhumana kanye nabezindaba amashumi eminyaka, umbhali oneminyaka engama-68 waqala ukubhala ngobungcweti ngonyaka we-2013, nencwadi yakhe yokuqala, iSahil, enesihloko sendodana yabo. Ngokulandelayo, washicilela i-biography yendela yaseSri Lankan, yalandelwa yincwadi yakhe yesithathu, u-Anam, eqanjwe ngendodakazi yabo. UMahe, nokho, yincwadi yakhe yokuqala ngesiNgisi - isiqalo esisha eminyakeni yakhe yokushona kwelanga nomlingani wakhe ebugebengwini. “Mina nomkami siyabambisana kukho konke. Selokhu ngathatha umhlalaphansi, ngikwenza umkhuba ukusebenzisa amahora ami okuvuka ngibhala. Ungumlaleli wami wokuqala, umphathi wami wokuqala, umhleli wami wokuqala, kanye nomgxeki wami unomphela. Uma engayithandi indaba, iphumile. Unomqondo omuhle wezindaba nombono. Zonke izindaba zami, ikakhulukazi lezo eziphathelene nabesifazane nezindaba zenhlalo eMahe kanye nazo zonke ezinye izincwadi zami zihlungwa nge-lens yakhe, ”usho kanje.
UMahe, umkakhe, wayeyintombazane yokuqala ukuphishekela nokuphothula iziqu esigodini sakubo e-Uttar Pradesh, emuva eminyakeni yama-70s. “Uvuthe umkhondo wamantombazane amaningi esigodini sangakubo. Ngemuva komshado wethu, wanginxenxa ukuthi ngikhuthaze abantu ekuphishekeleni izifundiswa, wangenza ngasiza abantu ngokwezimali ukuze bafunde, nokunye okuningi. Kungenxa yakhe ukuthi amantombazane amaningi angathola imfundo namuhla lapho, ”uyakhanya. USiddiqui naye wabuza izinkambiso zomndeni ezinzima ngesikhathi etshela umndeni wakhe ongumSulumane ukuthi umkakhe ngeke agqoke niqaab noma I-purdah uma engafuni. Konke lokhu, ezinsukwini zokuqala zomshado wabo, lapho babengazani njengabantu, bakhohlwa ukwazana njengabalingani.
“Umshado ohleliwe ufana nezakhiwo. Ungadala noma yini oyifunayo ngazo zonke izindlela onazo. Futhi uma ungakwazi, ungahlala ubhuduzele, uhlanganise bese uzama futhi, ”kuchaza ngomfanekiso, futhi ingxenye yenhliziyo yethu iyathenga kukho.
Ngokuncika okukhulu phakathi kwabantu, kunzima ukuqonda ukuthi lezi zithandani azibonanga ngisho nokubona ubuso bazo ngaphambi kokuba zishade ngo-1985. Akuyona into engavamile emibhangqwaneni evela ngalezo zinsuku, kodwa kuseyinto enkulu, uze ucabange ngayo. Ngenkathi labo abasesikebheni sethu bengakwazi ukugwedla badlule imisinga yokuma kobusuku obubodwa kanye nobudlelwano obungajwayelekile, ukuvuka eduze komuntu ofanayo iminyaka eminingi, futhi ngezithembiso zaphakade, yikhona okuhlukanisa lo mbhangqwana eminyakeni yabo yegolide, njengabanye abaningana abavela esizukulwaneni sabo. Kepha okunamathela yinduduzo abayitholile kulwazi - esongwe ngengubo yothando nokuvikeleka - ukuthi bayazi ukuthi iyikhethile, futhi lokho akuzange kubakhathaze, njengoba kungenzeka nakithi. “Uthando ukuphela kwento ephoqelekile, konke okunye kungakhethwa,” esho, futhi siyakuzwa ukumamatheka kukaZen ezwini lakhe.
Funda futhi: Ukuzinakekela: Izindlela ezi-5 Zokukhumbula Zokujabulela I-Valentine's Day Sans Pressure
ungalahlekelwa kanjani ukuzivocavoca okunamafutha esiswini
ngaphansi kwamehlo imibimbi yasekhaya ikhambi
amakhambi wemibimbi ngaphansi kwamehlo
Isixazululo senkanyamba kanye nokuwa kwezinwele